Bit By Bit - नीतिशास्त्र - 6.3 डिजिटल फरक छ
डिजिटल युगमा सामाजिक अनुसन्धान फरक विशेषताहरु छ र यसैले विभिन्न नैतिक प्रश्न उठ्छ।
एनालॉग युगमा, प्रायः सामाजिक अनुसन्धानमा अपेक्षाकृत सीमित मात्रा थियो र व्यावहारिक स्पष्ट नियमहरूको एक सेट भित्र। डिजिटल उमेरमा सामाजिक अनुसन्धान फरक छ। शोधकर्ताहरू-प्रायजसो कम्पनीहरू र सरकारहरूसँगको सहयोगमा - विगतका भन्दा सहभागीहरू भन्दा अधिक शक्ति छ, र कसरी शक्ति प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा नियम अझै स्पष्ट छैन। शक्तिद्वारा, मैले मात्र उनीहरूको सहमति वा मानिसहरूलाई जागरूकता बिना चीज गर्न सक्ने क्षमता भनेको हुँ। चीजहरू जुन प्रकारका व्यक्तिहरूले गर्न सक्छन् त्यस प्रकारका व्यवहारहरू तिनीहरूको व्यवहार देखाउँछन् र ती अनुभवहरूमा नामांकन गर्दछ। शोधकर्ताहरूको निरीक्षण र क्षतिपूर्ति गर्ने शक्ति बढ्दै जाँदा, कसरी शक्ति प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने स्पष्टतामा एक समान वृद्धि भएको छैन। वास्तवमा, शोधकर्ताहरुले निर्णय गर्न अनिवार्य छ कि कसरी आफ्नो शक्ति को असंगत र ओभरलैपिंग नियम, कानुन र मानदण्डों को आधार मा व्यायाम गर्ने। शक्तिशाली क्षमताओं र अस्पष्ट दिशानिर्देशहरूको यो संयोजनले कठिन परिस्थिति सिर्जना गर्दछ।
शक्तिको एक सेट छ जुन शोधकर्ताहरूसँग उनीहरूको सहमति वा जागरूकता बिना मानिसहरूको व्यवहार देख्न सक्षम छन्। शोधकर्ताहरूले, निस्सन्देह, यो विगतमा के गरिन सक्छ, तर डिजिटल युगमा, मापन पुरा तरिकाले फरक छ, तथ्य यो ठूलो डेटा स्रोतहरूको धेरै प्रशंसकहरु द्वारा बारम्बार घोषणा गरिएको छ। विशेष गरी, यदि हामी एक व्यक्ति विद्यार्थी वा प्रोफेसरको मात्रामा जान्छौं र यसको सट्टा एक कम्पनी वा सरकारी संस्थाको स्तरलाई विचार गर्दछ जसको साथमा शोधकर्ताहरू बढ्दै गएका छन् - सम्भावना नै नैतिक समस्याहरू जटिल हुन्छन्। एक रूपान्तरण जसले मलाई सोच्न मद्दत गर्दछ कि जनसंख्यक निगरानीको विचार पनप्टिकको दृश्यमा कल्पना गर्दछ। मूलतः जेरेमी बेंन्टम द्वारा जेलका लागि वास्तुकलाको रूपमा प्रस्तावित, पन्टोटोनिक एक केन्द्रीय घडीको वरिपरी बनाइएको कक्षसँग एक परिपत्र भवन हो (चित्र 6.3)। कसले यो घडीमा परेकाहरूलाई कोठामा सबै मानिसहरूको व्यवहार देख्न सक्दछ जुन आफैलाई देख्न सकिन्छ। प्रहरीधरहरा अनलाइन पुस्तकालय प्रहरीधरहरा अनलाइन पुस्तकालय पुस्तकालय: नेपाली प्रकाशनहरू (Foucault 1995) केही गोपनीयता समर्थकहरूलाई डिजिटल युगले हामीलाई एक पनप्टिक जेलमा लैजाएको छ जहाँ टेक कम्पनीहरू र सरकारहरू लगातार हाम्रो व्यवहार हेर्न र पुन: प्रयोग गर्दै छन्।
चितवन 6.3: पनप्टोनिक जेलको लागि डिजाइन, पहिले जेरेमी बेंन्टम द्वारा प्रस्तावित। केन्द्रमा, एक अज्ञात सीर छ जुन सबैको व्यवहार देख्न सक्छ तर हेर्न सकिँदैन। विली रिवेले, 1799 (स्रोत: विकिमीडिया कमेन्ट ) को रेखाचित्र।
यो उपकुल एकदम अगाडी बढ्नको लागी, कहिलेकाहीं सोशल शोधकर्ताहरूले डिजिटल युगको बारेमा सोच्न थालेका छन्, उनीहरूले आफैं घडीको भित्र कल्पना गर्छन्, व्यवहार देखाउँदै र मास्टर डाटाबेस सिर्जना गर्छन् जुन सबै प्रकारका उत्साह र महत्त्वपूर्ण अनुसन्धान गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर अहिले, घडीमा आफूलाई कल्पना गर्नुको सट्टा, एक कक्षमा आफैलाई कल्पना गर्नुहोस्। त्यो मास्टर डाटाबेसले हेर्नुपर्यो कि पावल ओम (2010) ले विनाशको डेटाबेस भनिन्छ, जुन अनैतिक तरिकामा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
यस किताबका केही पाठकहरू भाग्यशाली छन् कि ती देशहरूमा जहाँ जहाँ उनीहरूले उनीहरूको डेटा जिम्मेवार रूपमा प्रयोग गर्न र उनीहरूको विरोधीहरूको रक्षा गर्नका लागि उनीहरूको अनौठो सेयरहरू विश्वास गर्छन्। अन्य पाठकहरू धेरै भाग्यमानी छैनन्, र मलाई निश्चित छ कि जन निगरानी द्वारा उठाएका मुद्दाहरू तिनीहरूका लागि धेरै स्पष्ट छन्। तर म विश्वास गर्छु कि भाग्यशाली पाठकहरूको लागि पनि अझै पनि ठूलो निगरानीमा ठूलो महत्त्वपूर्ण छ: अप्रत्यक्ष माध्यमिक प्रयोग । त्यो हो, एउटा डेटाबेसको लागि सिर्जना गरिएको एक उद्देश्य - विज्ञापनहरू लक्षित गर्न भन्नुहोस् - एक दिन एक फरक उद्देश्यको लागि प्रयोग हुन सक्छ। अप्रत्याशित माध्यमिक उपयोग को एक भयानक उदाहरण द्वितीय विश्व युद्ध को समयमा भयो, जब सरकार को जनगणना डेटा यहूदियों, रोम, र अन्य (Seltzer and Anderson 2008) विरुद्ध नरसंहार को सुविधा को लागि उपयोग को लागि प्रयोग भएको थियो। शान्तिपूर्ण समयका दौरान डेटा एकत्र गर्ने तथ्याङ्कवादीहरू लगभग निश्चित रूपले राम्रो इरादा थियो, र धेरै नागरिकहरूले तिनीहरूलाई जिम्मेवार डेटा प्रयोग गर्नमा भरोसा गरे। तर, जब संसार परिवर्तन भयो- नाजीहरू बलियो भए - यी डेटाले दोस्रो माध्यमिक प्रयोगलाई सक्षम पारेको थिएन। एकदम मात्र, मास्टर डेटाबेस एक पटक अवस्थित छ, यो अनुमान गर्न कठिन छ कि यो को लागी पहुँच र यो कसरी प्रयोग गरिने हुन सक्छ। वास्तवमा, विलियम सेल्टजर र मार्गो एन्डरसन (2008) ले 18 वटा मुद्दाहरू दियो जुन जनसंख्या डेटा प्रणाली समावेश गरिएको छ वा सम्भावित मानव अधिकारको दुरुपयोग (तालिका 6.1) मा सम्भावित रूपमा संलग्न छन्। यसबाहेक, सेल्टजर र अन्डरसनले बाहिर निकाल्छ, यो सूची लगभग निश्चित रूपमा एक कमेन्ट हो किनभने अधिकांश दुर्व्यवहारहरू गुप्तमा छन्।
तालिका 6.1: कारणहरू जहाँ जनसंख्या डेटा प्रणालीहरू समावेश छन् वा मानव अधिकारको दुर्व्यवहारमा संभावित रूपमा संलग्न छन्। प्रत्येक मामला र समावेशी मापदण्डको बारेमा थप जानकारीको लागि सेल्टजर र एन्डरसन (2008) हेर्नुहोस्। केहि, तर सबै मा, यी मामलाहरुमा अप्रत्यक्ष माध्यमिक उपयोग शामिल छ।
लक्षित व्यक्तिहरू वा समूहहरू
मानव अधिकार उल्लङ्घन वा अनुमानित राज्य इरादा
अष्ट्रेलिया 19औं र प्रारम्भिक 20 औं शताब्दी Aborigines जनसंख्या दर्ता जबरजस्ती माइग्रेशन, नरसंहारको तत्व
चीन 1 966-76 सांस्कृतिक क्रांतिको समयमा खराब वर्गको उत्पत्ति जनसंख्या दर्ता जबरजस्ती माइग्रेशन, इन्ग्रेग गरिएको मोबाइल हिंसा
फ्रान्स 1940-44 यहूदीहरू जनसंख्या दर्ता, विशेष सनसनी जबरजस्ती माइग्रेशन, जेसोसाइड
जर्मनी 1 933-45 यहूदीहरू, रोम र अन्य धेरै जबरजस्ती माइग्रेशन, जेसोसाइड
हंगेरी 1945-46 जर्मन नागरिक र जर्मन मातृभाषा रिपोर्ट गर्ने 1941 जनसंख्या जनगणना जबरजस्ती माइग्रेशन
नीदरल्याण्ड 1940-44 यहूदीहरू र रोमी जनसंख्या दर्ता प्रणाली जबरजस्ती माइग्रेशन, जेसोसाइड
नर्वे 1845-1930 समिस र केन्सहरू जनसंख्या सेन्सर जातीय सफाई
नर्वे 1942-44 यहूदीहरू विशेष जनगणना र प्रस्तावित जनसंख्या रजस्टर जेसोकाइड
पोल्याण्ड 1 939-43 यहूदीहरू मुख्य विशेष सेन्सेन्स जेसोकाइड
रोमानिया 1 941-43 यहूदीहरू र रोमी 1941 जनसंख्या जनगणना जबरजस्ती माइग्रेशन, जेसोसाइड
रुवान्डा 1994 Tutsi जनसंख्या दर्ता जेसोकाइड
दक्षिण अफ्रिका 1950-93 अफ्रिका र "रंगीन" जनसंख्या 1951 जनसंख्या जनगणना र जनसंख्या दर्ता Apartheid, मतदाता भेदभाव
संयुक्त राज्य अमेरिका 19औं शताब्दी मूल अमेरिकी विशेष सेन्सेन्स, जनसंख्या रजस्टर जबरजस्ती माइग्रेशन
संयुक्त राज्य अमेरिका 1917 निलम्बित ड्राफ्ट कानून उल्लङ्घनकर्ता 1910 जनगणना दर्ताबाट जोगिन सक्नेहरूको जाँच र अभियोजन
संयुक्त राज्य अमेरिका 1 941-45 जापानी अमेरिकी 1940 जनगणना जबरजस्ती माइग्रेशन र इन्टरनेट
संयुक्त राज्य अमेरिका 2001-08 शंकास्पद आतंकवाद NCES सर्वेक्षण र प्रशासनिक डेटा घरेलू र अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादको जांच र अभियोजन
संयुक्त राज्य अमेरिका 2003 अरब-अमेरिकी 2000 जनगणना अज्ञात
यूएसएसआर 191939अल्पसंख्यिकी जनसंख्या विभिन्न जनसंख्या सेन्सर जबरदस्ती प्रवास, अन्य गम्भीर अपराधहरूको सजाय
साधारण सामाजिक शोधकर्ताहरू धेरै, धेरै भन्दा धेरै टाढा छन् जस्तै मानव अधिकारको दुर्व्यवहारमा माध्यमिक प्रयोग मा भाग लिन जस्ता। मैले यो छलफल गर्न चुनेको छु, तथापि, किनकि मलाई लाग्छ कि यसले तपाईंलाई कसरी तपाईंको काममा प्रतिक्रिया दिन सक्छ भनेर बुझ्न मद्दत गर्नेछ। उदाहरणको रूपमा, चश्मे, टाइज र टाइम प्रोजेक्टमा फर्कनुहोस्। फेसबुकबाट पूरा र ग्रेनेलर डेटा हर्वार्डको पूर्ण र अनुदान डेटा संग विलय गर्दा, शोधकर्ताहरु ले सामाजिक र सांस्कृतिक जीवन को छात्रों (Lewis et al. 2008) आश्चर्यजनक अमीर दृश्य बनाए। धेरै सामाजिक शोधकर्ताहरूलाई, यो मास्टर डेटाबेस जस्तो देखिन्छ, जुन राम्रोका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर केही अरूलाई, यो बर्बादको डाटाबेसको सुरुआत देखिन्छ, जुन अनैतिक रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। वास्तवमा, यो सम्भवतः दुवै को एक सा हो।
सामूहिक निगरानी को अतिरिक्त, शोधकर्ताहरु - फेरि कम्पनीहरु र सरकारहरु संग सहयोग मा - बिरुद्ध नियंत्रित नियंत्रण को उपयोग गर्न को लागि मान्छे को जीवन मा तेजी देखि हस्तक्षेप गर्न सक्छ। उदाहरणको लागि, भावनात्मक कोट्यागनमा, शोधकर्ताले प्रयोगमा 700,000 मान्छेलाई उनीहरूको सहमति वा जागरूकता बिना नामाकरण गरे। मैले अध्याय4मा वर्णन गरेको रूपमा, यस प्रकारको गोपनीय अनुच्छेद प्रयोगमा प्रयोगमा असामान्य छैन, र यसले ठूला कम्पनीहरूको सहयोगको आवश्यकता पर्दैन। वास्तवमा, अध्याय4मा, मैले तिमीलाई कसरी सिकाउनुभयो।
यस वृद्धिको अनुहारमा, शोधकर्ताहरू असंगत र ओभरलैपिंग नियमहरू, नियमहरू र मानदण्डहरूको अधीनमा छन्। यस विसंगतिको एक स्रोत यो छ कि डिजिटल युगको क्षमताओं नियमहरू, नियमहरू र मानदण्डहरू भन्दा बढी छिटो परिवर्तन हुँदैछ। उदाहरणका लागि, संयुक्त नियम (संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रायः सरकारी-वित्तपोषित अनुसन्धान गर्ने नियमहरू सेट) ले 1981 पछि धेरै परिवर्तन गरेको छैन। असंगतिको दोस्रो स्रोत भनेको छ कि सारको अवधारणाहरू जस्तै वरिपरिको गोपनीयता अहिलेसम्म सक्रिय रूपमा शोधकर्ताहरूले बहस गरिरहेको छ। , नीति निर्माताहरू र कार्यकर्ताहरू। यदि यी क्षेत्रहरूमा विशेषज्ञहरूले समान समान सहमतिमा पुग्न सक्दैन भने, हामीले अनुभवयोग्य शोधकर्ताहरू वा सहभागिताहरूलाई त्यसो गर्न आशा गर्नुपर्दैन। असंगतिको तेस्रो तथा अन्तिम स्रोत यो हो कि डिजिटल-उमेर अनुसन्धानले अन्य सन्दर्भहरूमा बढि मिश्रित हुन्छ, जुन सम्भावित अतिव्यापी मानदण्डहरू र नियमहरूको नेतृत्व गर्दछ। उदाहरणका लागि, भावनात्मक कोट्यागोन फेसबुकमा डाटा वैज्ञानिक र क्यारेलमा प्रोफेसर र स्नातक छात्रबीचको सहयोग थियो। त्यस समयमा, फेसबुकको सर्त सेवाको अनुगमनको लागी लामो समय सम्म फेसबुकमा यो तेस्रो-पक्षको निरीक्षण बिना ठूलो प्रयोगहरू चलाउन साधारण थियो। Cornell मा, मानदण्डहरू र नियमहरू फरक फरक छन्; वास्तवमा सबै प्रयोगहरू Cornell आईआरबी द्वारा समीक्षा गर्नुपर्छ। त्यसोभए, कसको नियम सेट भावनात्मक कन्फान्गुन-फेसबुकको वा कन्नेलको हो? जब असंगत र ओभरलैपिंग नियमहरू, नियमहरू, र मानदण्डहरू छन् पनि राम्ररी-अर्थ शोधकर्ताहरू सही कुरा गर्नमा कठिनाइ हुन सक्छ। वास्तवमा, विसंगतिको कारण, एक पनि सही कुरा हुन सक्छ पनि।
कुल मिलाएर, यी दुई विशेषताहरू-बढ्दो शक्ति र त्यस शक्तिलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बारे सम्झौताको कमी - यसको अर्थ हो कि डिजिटल युगमा काम गर्ने शोधकर्ताहरूले भविष्य भविष्यको लागि नैतिक चुनौतिहरू सामना गरिरहेका छन्। सौभाग्य देखि, यी चुनौतीहरूको सामना गर्दा, यो खरिदबाट सुरु गर्न आवश्यक छैन। यसको सट्टा, शोधकर्ताहरू अघि बढेको विकसित नैतिक सिद्धान्तहरू र ढाँचाबाट बुद्धिलाई आकर्षित गर्न सक्छन्, अर्को दुई भागका विषयहरू।